Wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya oo Garoowe tegey (Dhegayso) – Radio Daljir
Nofeembar 4, 2012 10:51 b 0
Garoowe Nov 4-2012-Wafdi kasocda Midowga Yurub oo uu hogaaminayo wakiilka cusub ee ?midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Dawlada Puntland.
U qaabilsanaha arimaha Soomaaliya ee Midowga Yurub ayaa waxaa socdaalka uu Garoowe ku tegey ku weheliya masuuliyiin kale oo uu kamid yahay madaxa barnaamijka nabad gelyada u qaabilsan arimaha Soomaaliya midowga Yurub.
Ambaasador Mechealle Cervone iyo xubnihiii la socday ayaa kulan gooni oo ay saxaafadda dibad joog ka ahayd waxay la qaateen ?Madaxweyna Dawlada Puntland Dr Cabdiraxmaan Sh Maxamed Faroole waxaana kulankaasi looga hadlay taagerada Midowga yurub ee Soomaaliya & qoondada Puntland ku leedahay taageeradaasi.
Madaxweyne Faroole iyo Ambaasador Mechealle ayaa kulanka kadib si wada jir ah ula hadlay saxaafadda iyagoo kawaramay waxyaabaha ay uga wada hadleen kulankaasi.”Aad iyo aad ayaan u soo dhawaynaynaa wafdiga Michael Cevone safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Somaliya, waa markii sadexaad ee Ambassador-ka iyo wafdigi uu hogaaminayo oo ka socda Midawga Yurub halkan ay noogu yimaadaan, imaatinkoodan maantana wuxuu noo leeyahay xiise gaar ah, waxaana halkan lagaga dhawaaqay macaawinadii ugu waynayd oo Midawga yurub uu Soomaaliya siiyo oo ah ? 158 Milyan Puntlandna ay tahay qaybta ugu wayn qaybaha soomaaliya oo deeqdan ka faa?idaysanaysa” ayuu yiri M/weynaha Dawlada Puntland.
Wakiilka Midowga Yurub ee arimaha Soomaaliya Ambaasador Mechealle Cervone oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in Midowga Yurub Soomaaliya u balan qaaday lacag gaaraysa ? 158 Milyan ?taasoo Puntland qoondo u heshay in ka badan ? 50.
“Halkan waxaan u nimi inaan kawada hadalo qoondada Puntland ka helayso deeqdas midowga Yurub taasoo lagu horumarin doono waxbarashada, caafimaadka, nabadgelyada, qaybta ugu badan ee Puntland ka heshay deeqda midowga Yurub waxaa lagu horumarinayaa deegaanka, sida ka hortaga xaalufinta dhirta, “ayuu yiri Mechealle Cervone.
Booqashada Mechealle Cervone ee Puntland ayaa kusoo beegan tay xili dhowaan uu safiirku tegey magaalada Muqdisho oo uu kaga dhawaaqay deeqda Midowga Yurub siinayo Soomaaliya.